FAQ | Lotaya
Rakuraku Uc-ll Premium
နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက် မကြရောက်သောနေရာ၊အေး၍ခြောက်သွေ့သော နေရာတွင် ထားသိုရမယ်။
1.09-405090074 သို့ ဖုန်းဆက်ပြီးဖြစ်စေ (viber)ပို့ပြီး ဖြစ်စေ မှာယူနိုင်သလို 2.Website မှလဲ မှာယူလို့ ရသလို
3.၀က်ဘ်ဆိုဒ် chattingမှလဲ မှာယူနိုင်ပါတယ်။ 4.ဖေ့ဘုတ် စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့်လဲ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
နယ်မှ မှာယူလိုပါက ငွေအရင်လွဲတာမျိုးဆောင်ရွက်ရပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ရန်ကုန်မှ မှာယူမယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်ဆိုရင်တော့ အိမ်အရောက်ငွေရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ နယ်ဆိုရင်တော့ မနက်ငွေလွဲ နေ့လည် ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ အမြန်ချောဖြင့်ဖြစ်စေ၊ကားဂိတ်မှ တစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊စာတိုက်မှဖြစ်စေ ပို့ဆောင် ပေးပါတယ်။ ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရောက်ရှိသည် အထိ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
လာခူလာခူ ပရီမီယမ်က တကယ် ကောင်းရဲ့လား?
လာခူလာခူပရီယမ်ကို အမေရိကန် ဟားဗာဗ့်တက္ကသိုလ်တွင် သုတေသနပြုလုပ်ကာ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်၊သောက်သုံးသူများသည် သိသာသော အကျိုးရလဒ်များကို ရရှိကြပြီး သုံးသူတိုင်းနှစ်သက်ကြသော ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ အပြင် အဘေးထွက်ဆိုးကျိုး 100%လုံးဝမဖြစ်ပေါ်ပါ။မိမိ ဖြစ်ပေါ်နေသော ရောဂါအလိုက် သောက်သုံးရပုံနှုန်းထားကွာခြားပါသည်။သင့်အတွက် လိုတရ လာခူလာခူ ပရီမီယမ်သည် ထူးခြားပြီး အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အိမ်တွင်း သမားတော် တဆူဖြစ်လာမှာ အမှန်ပါ။
ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ေ၇ာဂါအလိုက် သောက်သုံးနှုန်းကို ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ?
ကျေးဇူးပြုပြီး ဖုန်းဖြင့် ဖြစ်စေ စာပို့ပြီး ဖြစ်စေ မေးမြန်းခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်များ ဖြေဆိုမှု ဌာနမှ ပြန်လည် အကြောင်းပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိရောဂါအလိုက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။